October 2021 - Mega Wave
Zaw Gyi အောကျတှငျ Unicode နှငျ့ ဖတျရှု့နိုငျပါသညျ တောင်ကိုးရီးယားလူမျိုးတွေဟာ ထမင်းစားရင် ဘာလို့ ထမင်းကို ပန်းကန်လုံးလေး တစ်လုံးစာကိုပဲ ထည့်စားပါသလဲ…? ဆိုင်တွေမှာ ရောင်းရင်လည်း ထမင်း တစ်ပွဲစာဟာ တစ်လုပ်စာ သာသာမျှသာရှိတဲ့ ပန်းကန်လုံးလေး
Zaw Gyi အောကျတှငျ Unicode နှငျ့ ဖတျရှု့နိုငျပါသညျ လူသားများ ဖူးမြော်ကြည်ညိုခွင့်မရတဲ့ စေတီထူး ၃ ဆူ ကို သင်သိပြီးပြီလား လူသားများ မဖူးရတဲ့ စေတီထူး ၃ ဆူဆိုတာရှိပါတယ်… (၁) စူဠာမဏိစေတီတော်၊
Zaw Gyi အောကျတှငျ Unicode နှငျ့ ဖတျရှု့နိုငျပါသညျ သင့်ကို မြန်မြန်ရုပ်ရင့်သွားစေနိုင်တဲ့ နေ့စဉ် အလေ့အထ ( ၁၀ ) မျိုး သင့် ရုပ်ရည်က လက်ရှိအသက်ထက် ပိုရင့် နေသလား။ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်
Zaw Gyi အောကျတှငျ Unicode နှငျ့ ဖတျရှု့နိုငျပါသညျ မြန်မာတွေမသိကြတဲ့ နတ်ပြည်ကပေးသော ရတနာသစ်ပင် မြေအောက်ရေ စုပ်ယူမှုများတဲ့ မလေးရှားပိတောက် တို့ ယူကလစ်ပင်တို့ စိုက်မယ့်အစား ဒီအပင်ကိုစိုက်သင့်တယ်. .”နတ်ပြည်က ပေးတဲ့ရတနာသစ်ပင် ”Tropical Treasures
Zaw Gyi အောကျတှငျ Unicode နှငျ့ ဖတျရှု့နိုငျပါသညျ အိမ်တိုင်းမှာလုပ်လေ့ရှိတဲ့အရာတွေက ပစ္စည်းတွေကို ကြာရှည်စွာသုံးစွဲတာ၊ တစ်ခုခုပျက်စီးသွားရင်ပြန်ပြီးသုံးမယ်ဆိုပြီးလွှင့်မပစ်ရက်ပဲသိမ်းထားတာတွေ၊ အသစ်မလဲပဲပစ္စည်းဟောင်းတွေကို အထပ်ထပ်သုံးစွဲနေတာမျိုးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အိမ်ကိုထိန်းသိမ်းတဲ့သူတွေလုပ်တတ်တဲ့အယူအဆအမှားတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မရှိဘူးထင်ပြီးပစ္စည်းတွေကို သုံးစွဲတာတွေရှိနေတာကြောင့်အိမ်တွင်းပစ္စည်းအချို့ရဲ့သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်နော် (၁) သွားတိုက်တံ သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေးအတွက်သွားဆရာဝန်တွေကသွားတိုက်တံကို
သင့်အိမ်မှာ ငှက်ပျောပင်ရှိတယ်ဆိုရင် ထီပေါက်သလို ပျော်လိုက်ပါ
Zaw Gyi အောကျတှငျ Unicode နှငျ့ ဖတျရှု့နိုငျပါသညျ သင့်အိမ်မှာ ငှက်ပျောပင်ရှိတယ်ဆိုရင် ထသာခုန်လိုက်တော့ သင်ထင်မထားတဲ့ ငှက်ပျောရွက်ရဲ့ အကျိုးအာနိသင် ငှက်ပျောရွက်က စားစရာတစ်ခုမဟုတ်သလို ဆေးဖက်ဝင်မယ်လို့လည်း ဘယ်သူမှထင်ထားလောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ထုပ်ပိုးမှုအတွက် သုံးတာကလွဲလို့ ငှက်ပျောရွက်ကို စားဖို့
“ရာဇဝင်ထဲက မင်းဆိုး မင်းညစ်ရဲ့ နိဂုံး”
Zaw Gyi အောကျတှငျ Unicode နှငျ့ ဖတျရှု့နိုငျပါသညျ ပုဂံခေတ် သက္ကရာဇ် ၆၁၇ ခုနှစ်ခန့်တွင် နရသီဟပတေ့မင်းနန်းတက်ပါသည်။ ထိုမင်းသည် ဖခင်လက်ထက်က မိဖုရားအရာ ထားခဲ့သော မိဖုရားစောကိုပင် ဆက်လက်ပြီး မိဖုရားမြှောက်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ပညာအရာတွင် သူမတူအောင်
သင့်ကို အံသြသွားစေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အချက်များ
Zaw Gyi အောကျတှငျ Unicode နှငျ့ ဖတျရှု့နိုငျပါသညျ သင့်ကို အံသြသွားစေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အချက်များ သက်ရှိတွေထဲမှာ လူတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုဟာ အရှုပ်ဆုံးလို့ အားလုံးလက်ခံထားကြပါတယ်။ အရှုပ်ဆုံးဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့
စိတ်ဓာတ်ကျရင် ၃ စင်တီမီတာ ကိုသတိရပါ။
Zaw Gyi အောကျတှငျ Unicode နှငျ့ ဖတျရှု့နိုငျပါသညျ စိတ်ဓာတ်ကျရင် ၃ စင်တီမီတာ ကိုသတိရပါ။ စိတ်ဓါတ်ကျခဲ့ရင် မရပ်တန့်လိုက်ပါနဲ့၃_စင်တီမီတာကိုသတိရပါ… ဝါးပင်တစ်ပင်က ၃ စင်တီမီတာ ကြီးဖို့ ၄ နှစ်အချိန်ပေးရပါတယ်။ အဲ့ဒီ ၎